LiveRotate, kana maitiro ekutenderera Mapikicha kubva kuiyo iPhone | IPhone nhau
Pane zvinhu nezveApple zvisinganzwisisike: Nyamavhuvhu wapfuura vakaratidza Mapikicha eLive, kuwedzera kunopa hupenyu hwemasekondi matatu kumifananidzo yatinotora neyedu iPhone 6s / Plus kana 9.7-inch iPad Pro. Izvo zvisinganzwisisike ndezvekuti, semuenzaniso, kana isu tichida kutenderedza Rarama Photo, iyo mashiripiti mhedzisiro inonyangarika uye inova ichakamira mufananidzo. Tingavaita seiko uye nekuvaramba vachifamba? Zvakanaka, senguva dzose, kushandisa chechitatu-bato software, senge LiveRotate.
Kushandisa LiveRotate kuri nyore kwazvo zvekuti zvakare hatinzwisise kuti zvakafanana hazvigone kuitwa sei neiyo default iOS Reel Photo Edhiyo. Senge patinenge tichida kugadzirisa mufananidzo kubva kuiri reel, patinenge tichida tenderera Rarama Mifananidzo Ne LiveRotate, tichaona pazasi icon inoratidzika zvakanyanya senge iyo Apple inosanganisira mune yayo mupepeti, asi iri girini. Nguva imwe neimwe yatinobata, tinofambisa iwo mapikicha 90, kuruboshwe, saka kana tichida kutenderedza Live Photo kurudyi, isu tichafanirwa kubata icon katatu.
LiveRotate inokutendera iwe kutenderedza yako Mhenyu Mapikicha
Ichitsanangurwa zvishoma mashandisiro anoita mashandisiro, mumwe anofanirwa kubvunza: zvakakosha here? Ngatione: LiveRotate haisi yemahara kunyorera, ine mutengo we € 0.99. Kana ndikazvibvunza mubvunzo nhasi, Chikumi 13, imhaka yekuti mune isingasviki awa WWDC ichatanga uye ichauya iOS 10 . € 1 hapana chinhu chekushandisa kana ichitipa mhedzisiro inotarisirwa, asi inogona kugara ichiuya kune chimwe chikumbiro chatichazoshandisa, tichigara tichifungidzira kuti iOS 10 inotibvumidza kutenderedza iyo Mhenyu Mifananidzo mune yemuno.
Chero zvazvingaitika, LiveRotate inotibvumidza kutenderedza maApple "mapikicha mhenyu" ipapo uye yekupedzisira vhezheni yeIOS 10 ichasvika munaGunyana, saka kana uchiida, unofanira kungobaya / kubata pane inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » LiveRotate, kana maitiro ekutenderedza Mhenyu Mapikicha kubva ku iPhone
Iyo Xbox app yakavandudzwa ichiwedzera nhau dzakakosha